Sunday September 08, 2019 - 08:50:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Donald Trump oo farriimo dhowr ah soo dhigay bartiisa Twitter ayaa sheegay in uu joojiyay dhammaan wadahadalladii dhanka nabadda ee kala dhaxeeyay Taliban sababa la xiriira weerar askar American ah lagu dilay oo Talibaan ay isbuuc lasoo dhaafay ka fulisay magaalada Kaabuul.
Hoggaamiyaha Mareykanka wuxuu sheegay in uu gabi ahaanba joojiyay kulan qarsoodi ah oo maalinta Axadda uu Camp David kula yeelan lahaa hoggaamiyaal ka socda Taliban "waxaan joojiyay kulan aan la qaadan lahaa hoggaamiyaasha Taliban wadahadalladii Nabadanna waa lajoojiyay sababa laxariira iyagoo sheegtay mas'uuliyadda weerar 12 qof lagu dilay oo Kaabuul ka dhacay" ayuu tiri Trump.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in uu aad uga carooday dilka sarkaal katirsanaa ciidamada Mareykanka oo kamid noqday 12 katirsan NATO oo khamiistii lasoo dhaafay lagu dilay weerar ka dhacay hareeraha faraca 40aad ee sirdoonka xukuumadda Afghanistan.
Trump ayaa sababta uu u joojiyay wadahadallada Taliban ku sheegay iyagoo dilay askari dhankooda ku weynaay, hadalkan carada leh ee kasoo yeeray madaxweynaha Mareykanka ayaa imaanaya maalmo kadib markii xoogaga Jihaadiga Taliban ay laba howlgal oo naf hurnimo ku beegsadeen ciidamada Mareykanka ee Afghanistan.
Mareykanka oo jaray xiriirkii kala dhaxeeyay hay'adda WHO.
Taliban oo weerar naf hurnimo ku beegsaday saldhig ciidan oo kuyaal wadanka Afghanistan.
Taliban oo Weerar Naf hurnimo ku qaadday Saldhig Melleteri oo dhaca Bariga Afghanistan.
Obama oo Trump ku tilmaamay nin islaweyn oo aan waxba qaban.
Duullaankii Badar Maalinkii Uu Alle kala saaray Xaqqa iyo Baadilka [Warbixin].
Dowladda Mareykanka oo dalbatay lacago Ammaah ah iyo Trump oo ka cabaaday Covid19.
72,000 American ah oo Carona udhimatay iyo Trump oo kala diray guddi caafimaad.
Taliban oo weerar cagmarin ah ku qaadday Saldhig kuyaal Koonfurta Afghanistan.